I-Tappan Lake Dredging Project, Icala Lokubuyiselwa Kwedamu
I-Tappan Lake Dredging Iqala nge-Ellicott Brand® 370 Dragon Dredge
IHARRISON COUNTY, OH (USA) - Ukwehlukaniswa kwezindawo zaseTappan Lake sekuqale ukusebenza nemishini ekhona, nangokusho kwamanzi, ngokusho kukaBarbara Bennett, umqondisi kwezokuphatha eMuskingum Watershed Conservancy District (MWCD).
Lolu daba lwadingidwa emhlanganweni wenyanga wangoLwesihlanu, obubanjelwe eCharles Mill Lake Park yaseMansfield.
UBennett wathi ama-400,000 ama-cubic yards okudonsela izosuswa ngaphansi kweTappan, okuzokwenzeka eduze neBeaverdam Run Bay, Sula Fork Bay kanye nakuzo zombili izinhlangothi zomgwaqo u-Deersville Road.
I-silt izovakulwa ngepayipi elivumayo, elizodlula ngaphansi kwe-US 250 liye esakhiweni se-MWCD, esekhoneni esenyakatho-ntshonalanga ye-Addy Road ne-US 250, ngokusho kukaBennett.
Umshini omkhulu ohlaza okwesibhakabhaka nomhlophe onesiqeshana esikhulu se-orange sanikezwa igama elithi "CADIZ," esho futhi wengeza ukuthi ama-racking racks kanye nemicengezi esekwe endaweni yase-Addy.
"Uhlelo lokwenza kabusha amanzi luyindlela yokusebenza nesimo sezinhlelo zobuciko," kusho uBennett nge-imeyili. Uthe ukusebenzisa uhlelo lokupompa kuzonciphisa isiminyaminya samaloli, okuvame ukusetshenziselwa ukukhipha udoti. Uhlelo lokukhipha amanzi, okwaxoxwa ngalo emihlanganweni edlule ye-MWCD, luyisistimu, ekhipha udoti ngokushesha okukhulu, evumela abemukeli bokuthi bayisebenzise ngokushesha kunokwejwayelekile.
"Sinezingxoxo eziqhubekayo neHarrison County kanye ne-ODNR (UMnyango Wezemvelo wase-Ohio)," kusho uBennett. "Akukho lutho oluphothuliwe kodwa sizoba namagceke e-400,000 ama-cubic ezibonakalayo ngakho-ke kukhona izinto ezinhle zokugcwalisa noma zokusebenzisa kwenye indawo."
UKhomishani weHarrison County, uDon Bethel, usho okufanayo ukuthi basaqhubeka nokudingida lolu daba ne-MWCD futhi basafuna kakhulu ukuthola okunye kwalolo dweshu kukhishwe echibini.
IBethel yayikushilo emhlanganweni owedlule phambilini konyaka ukuthi umbono owodwa wokutholwa kokudiliza uzosetshenziswa ekugcwaliseni izigodi eziningi eziseduzane neParket Park Road. Umqondo ukwengeza indawo ethe xaxa ukuze le ndawo ikhange ngokwengeziwe emabhizinisini abalekayo, aseqalile ukuqhamuka lapho.